China Mapepa Mabhokisi, Mapepa Mabhegi, Kudhinda mabhuku, Kadhibhodi Bhokisi Mupi
Pepa Packaging Bhokisi
Chipo Bhokisi >
Pepa Chipo Bhokisi
Bow Tie Bhokisi
Bhongo / Bangle Bhokisi
Pepa Packaging Bhokisi >
Craft Pepa Bhokisi
Pepa Bhegi >
Pepa Chipo Chegi
Pepa Bhegi Rakadhindwa
Kraft Pepa Bhegi
Pepa Bhegi Nekubata
Pepa Shopping Bhegi
Bhuroka / kabhuku
Pepa Kadhi >
Kukoka / Kadhi rekukwazisa
Yakadhindwa Pepa Kadhi
Kraft Pepa Envelope
Pepa Packaging Bhokisi
Paper Gift Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Paper Gift Box)
Tsika yepepa Chipo yekuisa bhokisi nevharo
Packaging: yakarongedzwa mu A = A / K = K yakaiswa mabhokisi ekunze
Tsika chivharo uye base pepepa chipo kurongedza bhokisi Chipo chakaputirwa bhokisi chakagadzirwa nenzira yakapfava yebhokisi: chivharo uye base bhokisi, asi yakakwira mhando yeCMYK kudhizaina yakasarudzika dhizaini inoita kuti itaridzike kunge yakasarudzika, zvakare iwe unogona kuwedzera uta wembabvu kune bhokisi kuti...
Yakanakisa bepa rezvipo bhokisi nebhokisi rendarama
Yakanakisa bepa rezvipo bhokisi nebhokisi rendarama Yakanakisa bepa rebhokisi rine dhizaini dhizaini zvinoita kuti zvive nyore kubvisa, kana iri mbambo, isu tinoshandisa goridhe yakamonyoroka panguva ino, kana uchida, iwe unogona zvakare kusarudza ribhoni, tambo yekotoni kana Polyester tambo uye zvichingodaro. Uye...
silinda pepa reKisimusi rezvipo bhokisi nebhokisi
Packaging: yakarongedzwa mu A = A / K = K yakaiswa kunze mabhokisi
silinda pepa reKisimusi rezvipo bhokisi nebhokisi cylinder bepa rebhokisi neCMYK kudhinda kweKisimusi zvipo zvipo Yakasarudzika cylinder chipo bhokisi nejasi, bvisa nyore nyore Kugamuchirwa tsika gadzira chipo chebhokisi pane chako dhizaini Chero mibvunzo kana kubvunza, pls inzwa wakasununguka kubata Benty. Liyang...
Brown kraft pepa chipo kurongedza bhokisi
Packaging: yakarongedzwa muK = K yakatsikiswa mabhokisi ekunze kana seari maererano nevatengi zvinodiwa
Brown kraft pepa chipo kurongedza bhokisi brown kraft pabhokisi bhokisi , rakaomeswa kadhibhokisi bhokisi rekutakura zvipo kraft pepa rebhokisi bhokisi rakasvibira ribhoni kuvhara kwechipo kurongedza, pane akasiyana mavara eribhoni yesarudzo yako. bepa rezvipo repasuru bhokisi rakagadzirwa mune rakapetwa foldable...
Kadhibhodi kurongedza bepa rezvipo bhokisi nevharo
Packaging: K = K Yakadzvanywa Kadhi Bhodhi Mabhokisi Ekutakura
Kupa Mazano: 30000 per month
Kadhibhodi kurongedza bepa rezvipo bhokisi nevharo Pepa bhokisi kudhinda, yakagadziriswa logo kudhinda nesilver stamping, kupenya uye fashoni. Chipo bhokisi repepa, yakasvibirira mapepa ebhokisi rezvigadzirwa zvigadzirwa, zvemhando yepamusoro. Packaging zvipo bhokisi, kadhibhokisi bhokisi rine lid, rakakosha dhizaini...
denderedzwa bepa rezvipo bhokisi rekuchengeta wega
Kupa Mazano: 300000 per month
denderedzwa bepa rezvipo bhokisi rekuchengeta wega chengetedzo yekuchengeta wega bhokisi , yakakwira mhando yeCypstom dhizaini yekudhinda yega. rako rekuchengetedza bhokisi riri mumatenderedzwa mabhokisi masiteki neyako kambani logo logo yekudhinda inoshandiswa kune munhuel kutarisirwa kwechipo kurongedza Nomutsa ziva...
Yepamberi yemakadhibhodhi echipo bhokisi rekuisa nemagineti
Yepamberi yemakadhibhodhi echipo bhokisi rekuisa nemagineti Pepa kupeta bhokisi, kadhibhokisi bhokisi nemagineti, tsika yekudhindisa logo . Chipo bhokisi nemagineti, zvipo zvinorongedzwa nemhando yepamusoro, zvakaoma kutyora . Kadhibhodi kurongedza bhokisi, pepa chipo bhokisi kune zvigadzirwa kurongedza, kamwe kunze...
Tsika yakadhindwa bepa rezvipo bhokisi nebhokisi rekuisa
Tsika yakadhindwa bepa rezvipo bhokisi nebhokisi rekuisa Pepa bhokisi chipo, bhuku sebhokisi neribhoni, fancy uye yakakwirira mhando . Chipo bhokisi pamwe nekuisa, dema bhokisi pamwe nekuisa, zvakanaka kune zvigadzirwa kurongedza . Yako yakagadzirirwa Chipo Bhokisi, kupeta zvipo pabhokisi bhokisi, yakajairwa saizi uye...
Cosmetic kadhibhodi kurongedza zvipo bhokisi nemucherechedzo
Cosmetic kadhibhodi kurongedza zvipo bhokisi nemucherechedzo Cosmetic makadhibhokisi emabhokisi, pepa rinorongedza bhokisi rine inopisa foil logo, yakapusa uye yakanakisa . Chipo cosmetic mabhokisi, bepa rekushongedza bhokisi nebhokisi rekuisa, rakakwirira remhando yezvigadzirwa kurongedza . Packaging zvipo mabhokisi,...
Tsika bhandi kurongedza bepa Chipo bhokisi
Tsika bhandi kurongedza bepa Chipo bhokisi Iri bhandi rinorongedza bhokisi yakaomarara makadhibhokisi bhokisi, isu tinoita iyi belet bepa bhokisi mune yakapepuka chivharo uye base bhokisi masitayiti ane stamping logo pane ekunze kwebhokisi, iyo bhokisi maitiro uye dhizaini yakagadzirwa yakagadzirwa, mamwe mabhokisi...
Round brown kraft pepa rezvishongo bhokisi
Round brown kraft pepa rezvishongo bhokisi Rigid rinotenderedza pepa rezvipo bhokisi , rine mhando yepamusoro yekudhindisa dhizaini yako logo kana dhizaini brown pepa rezvipo bhokisi, denderedzwa kraft pabhokisi bhokisi rinoshandiswa kupa zvipo Yakakomberedzwa jewelry pepa bhokisi nebhokisi mune goridhe foil stamping...
Round jewelry zvishongedzo mapepa ezvipokisi bhokisi
Round jewelry zvishongedzo mapepa ezvipokisi bhokisi Zvishongo mapepa ekushongedza bhokisi , rakagadzirwa rakakurumbira rinotenderera bhokisi maitiro, lid uye base base, bhokisi rakapetwa bhokisi, bhuku rakavezwa bhokisi uye zvichingodaro zvakare nesarudzo yako. Round jewelry zvishongo bhokisi neasilika ribhoni...
Round bangle bracelet jewelry pepa chipo bhokisi
Round bangle bracelet jewelry pepa chipo bhokisi Bangle pepa bhokisi , rakagadzirwa rakakurumbira kutenderera bhokisi dhizaini, chivharo uye base bhokisi, bhokisi rakapetwa bhokisi, bhuku rakaumbwa bhokisi uye zvichingodaro zvakare nesarudzo yako. Round bangle bhokisi neasilika ribhoni kushongedza, ita kuti bhokisi...
akarembera foni kurongedza bepa rezvipo bhokisi
akarembera foni kurongedza bepa rezvipo bhokisi Pepa rinorembera bhokisi , rakagadzirwa 350gsm ukobvu art pepa rine mhando yepamusoro kudhinda kudhinda chakarembera chipo bhokisi, cheap bepa mubhokisi akarembera buri pamusoro yaanogara kavha, regai iwe nyore kutakura kana kuisa kuti rack matt kurira kwefoni bhokisi...
Yepamberi kadhibhodhi tii chipepa chebhokisi chipokisi kurongedza
Yepamberi kadhibhodhi tii chipepa chebhokisi chipokisi kurongedza Rigid kadhibhokisi bhokisi , tii pepa bhokisi neiyo kambani yako kudhinda logo Hombe yetiyeni bhokisi rakagadzirwa mubhuku rakaumbirwa bhokisi masitayiti nevhara yemagineti yekuvhara kwetii Tea kadhibhokisi bhokisi rine kadhibhokisi tray mukati meti...
Scarf pepa rinorongedza zvipo bhokisi nevharo
Scarf pepa rinorongedza zvipo bhokisi nevharo Rigid scarf mapepa ekuisa pabhokisi , ane mhando yepamusoro kudhinda kudhinda kwechiratidzo chako kana dhizaini Scarf bepa rezvinhu bhokisi, yakareruka chivharo uye base bhokisi maitiro anoshandiswa kushongedza mucheka Scarf bhokisi rine chivharo , pepa bhokisi rine...
Ruva pepa chipo bhokisi neiyo yakajeka PVC hwindo
Ruva pepa chipo bhokisi neiyo yakajeka PVC hwindo Ino Ruva Pepa Chipo Bhokisi rakagadzirwa rakabatanidzwa pepa neCMYK yakazara ruvara kudhinda. Ruva Chipo Bhokisi nePVC Window dhizaini yemaruva kuratidzwa. Pepa Chipo Bhokisi neakajeka Window kaviri plug bhokisi mhando inogona kuve yakapetwa pakiti uye chengetedza...
Yepamberi Pepa Perfume Packaging Bhokisi Kugadzirwa
Anonhuhwirira anonhuhwirira kurongedza bhokisi dhizaini Luxury Perfume Bhokisi rakagadzirwa neyemapepa mapepa emuchadenga mapepa emabhodhi ezvepamusoro pazvipo zvekutakura; Icho chimiro cheiyi Perfume Bhokisi Kugadzirwa pamusoro kunge suo; Perfume Packaging Bhokisi neEVA yekuisa kuti ubate zvinonhuwira bhodhoro....
Nyore yakagadzirirwa-yakagadzirwa piro pepa chipo bhokisi
Nyore yakagadzirirwa-yakagadzirwa piro pepa chipo bhokisi Nyore yakagadzirirwa-yakagadzirwa piro pepa chipo bhokisi iro yakachipa mapepa bhokisi pilo chimiro chimiro chinoshandiswa kupfeka zvipfeko. rakadaro Pepa Chipo Chipo Bhokisi rakagadzirwa neyakavharwa art chena pepa rine tsika logo uye dhizaini kudhinda....
Yakagadzirirwa Pepa Chipo Bhokisi Empty Stack Bhokisi
Yakagadzirirwa Pepa Chipo Bhokisi Empty Stack Bhokisi Yakasarudzika Pepa Chipo Bhokisi Empty Ekuchengetedza Bhokisi neakasimudzwa logo . Kraft Pepa Chipo Bhokisi rekuputira, rakakosha dhizaini uye yakanaka mhando . Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani iri muDongguan, China....
Yakazara ruvara pepa chipo bhokisi kurongedza tsika
Yakazara ruvara pepa chipo bhokisi kurongedza tsika Iri Pepa Chipo Bhokisi Packaging rakagadzirwa rakarongedzwa art pepa neCMYK yakazara ruvara kudhinda. Pepa Packaging Chipo Bhokisi dhizaini yezvirongedzo zvezvipo. Packaging Pepa Bhokisi bhuku kukiya -bhodhi inogona kuve yakatetepa pakiti uye chengetedza vhoriyamu...
Tsika yepamusoro yemhando yakagadzirwa isina chinhu kraft pabhokisi
Tsika yepamusoro yemhando yakagadzirwa isina chinhu kraft pabhokisi Iyi Packaging Bhokisi yakagadzirwa neyakavharika art pepa neCMYK yakazara ruvara kudhinda. Pepa Bhokisi dhizaini yezvipo kurongedza. Hard Pepa Chipo Bhokisi rinogona kuve rakapetwa pakiti uye chengetedza vhoriyamu kana ichiendeswa. Liyang Pepa...
Ruvara Rakadhindwa Magnetic Foldable Kuchengeta Pepa Chipo Bhokisi
Ruvara Rakadhindwa Magnetic Foldable Kuchengeta Pepa Chipo Bhokisi Dhizaini nyowani yemagineti bhokisi inorongedza nePVC hwindo, mutengo unodhura une yakakwira mhando. Multi-inoshanda foldable bhokisi rekuchengetera chipo, zvishandiso, zvishongo, zvipfeko, bhandi, wachi, waini kurongedza. Pepa bhokisi rezvipo...
Tsika yekurongedza kadhibhodhi pepa chipo bhokisi
Tsika yekurongedza kadhibhodhi pepa chipo bhokisi Tsika yekuisa makadhibhodhi emapepa ebhokisi rezvipo, mutengo wepel nemhando yepamusoro. Chipo bhokisi rine logo rakadhindwa, rizere neako compant ficha. Kutakura Pepa Chipo Bhokisi rine yakagadzirirwa saizi uye dhizaini, yakanaka giredhi. Tsvaga zvigadzirwa zvemhando...
caja para flores Suede Ruva Chipo Bhokisi Round
Packaging bhokisi remazambara ehuni zvipfeko
A4 size brown envelopu ine kuvhara bhatani
Akachipa anodhura mapepa ekupa zvipo zvishongo bhokisi
Rose Bhokisi Rakachengetedzwa Ruva Goridhe Nhema Chipo Tsika
Yakakura Velvet Rose Cardboard Chipo Bhokisi Kune Maruva
Grey Square Yakachengetedzwa yemaruva bhokisi nedhirowa
Chikamu chechipo chakaputirwa maginiti bhokisi remakadhi ekukoka
Kadhibhodi Wine Pabheji Packaging Bhokisi Tsika 2 Bhodhoro
Horo Yemagnetic Chipo Kutakura Chokoreti Yekukoka Bhokisi
Yakatenderedza Zvishongo Bhokisi reBhurawu Packaging
Pepa Dema Chipo Mabhokisi ane maLids eRuva
Yepamberi chokoreti bar pepa rekutakura bhokisi
kadhibhodi glossy shati mapepa ekuisa bhokisi
Foldable macheka echipo bhokisi rine lid
Kupukuta pepa bhokisi Chipo bhokisi neribhoni
Magnetic lid eyelash yekuisa bhokisi nepurasitiki tray
inopisa-tengesa chokoreti macaron chikafu kurongedza chipo bhokisi
Paper Gift Box Paper gift boxes paper gift box Paper tea box Paper Box Gift Paper watch box paper food box Safety gift box
CertificatesCompany ShowVhidhiyo360° Virtual Tour
Copyright © 2021 Liyang Paper Products Co., Ltd. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.